माथिल्लो तामाकोशी परीक्षणमा, काठमाडौं–कोहलपुरसम्म विजुली काटिन सक्ने - Naya Pageमाथिल्लो तामाकोशी परीक्षणमा, काठमाडौं–कोहलपुरसम्म विजुली काटिन सक्ने - Naya Page
माथिल्लो तामाकोशी परीक्षणमा, काठमाडौं–कोहलपुरसम्म विजुली काटिन सक्ने
काठमाडौं, १२ असार । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले यही असार मसान्तभित्रै १५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ । असार मसान्तभित्रै आयोजनाका दुई युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेका अनुसार पहिलो चरणमा पहिलो युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै, हाल दोस्रो युनिटको पनि परीक्षणको काम भइरहेको छ । सो युनिटको समेत काम सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय प्रणालीमा बिजुली जोड्न लागिएको हो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण सुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि सम्पन्न हुन लागेको हो । प्राकृतिक विपत्ति तथा अनेकन समस्यासँग जुध्दै स्वदेशी लगानीकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको हो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि यही असार १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म आवश्यक तयारी गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइन व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको डा. न्यौपानेले जानकारी दिए ।
माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत गृहबाट आएको २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनलाई न्यु खिम्तीमा रहेको सबस्टेसनमा जोड्न लागिएको छ । ‘तामाकोशी करिडोरबाट आएको प्रसारण लाइनको बिजुली न्यु खिम्ती सबस्टेसनमा जोडिने भएको छ, सोही सबस्टेसनबाट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ’, डा. न्यौपानेले भने । यसअघि बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनमा जोड्ने तयारी थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले आज एक सूचनामार्फत राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम भएकाले खिम्ती–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन बन्द हुने जानकारी गराएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको सुरुङमा पानी हालेर हाल पनि परीक्षणलगायत काम भइरहेको छ । आयोजनामा कुल ६ युनिट रहेका छन् । स्वदेशी लगानीको ठूलो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा अनेकन आशंका पैदा भएका थिए । सरकारले सबै खालका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोनालगायत कारण पछाडि धकेलिँदै आएको थियो ।
सबैको साथ र सहयोगका कारण माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आयोजनाले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । रासस